1 Samuel 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
9 Ná Benyamin aseni bi wɔ hɔ a ne din de Kis,+ Abiel ba, Seror ba, Bekorat ba, Afiya ba; ná ɔyɛ Benyaminni+ ɔdefo.+ 2 Ná ɔwɔ ɔbabarima bi a ne din de Saul,+ aberante a ne ho yɛ fɛ a Israelni biara nni hɔ a ɔsen no ahoɔfɛ mu; efi ne mmati rekɔ no, na ɔware sen obiara, ɔman no mu.+ 3 Saul papa Kis mfurum+ yerae. Enti Kis ka kyerɛɛ ne ba Saul sɛ: “Mesrɛ wo, fa asomfo no biako ka wo ho, na sɔre kɔhwehwɛ mfurum no.” 4 Na ɔfaa Efraim+ mmepɔw so kɔfaa Salisa+ asase so, nanso wɔanhu wɔn. Afei wokotwaam Saalim asase so, nanso na wonni hɔ. Na ɔkɔfaa Benyaminfo asase so, nanso wɔanhu wɔn. 5 Bere a wokoduu Suf asase so no, Saul ka kyerɛɛ ne somfo a ɔka ne ho no sɛ: “Bra ma yɛnsan nkɔ na me papa annyae mfurum no akyidi ammedwen yɛn mmom ho.”+ 6 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Onyankopɔn nipa+ bi wɔ kurow yi mu, na ɔwɔ nidi paa. Asɛm biara a ɔka ba mu.+ Ma yɛnkɔ hɔ seesei ara. Ebia ɔbɛkyerɛ yɛn ɔkwan a yɛmfa so.” 7 Ɛnna Saul ka kyerɛɛ ne somfo no sɛ: “Sɛ yɛkɔ a, dɛn na yɛde bɛkɔ akɔma ɔbarima no?+ Paanoo a ɛwɔ yɛn nneɛma mu asa, na hwee nni hɔ a yɛde bɛkyɛ+ nokware Nyankopɔn nipa no. Dɛn na yɛwɔ?” 8 Na ɔsomfo no san ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Hwɛ! Mikura dwetɛ dwetɛbona+ abupɛn anan mu biako; metumi de ama nokware Nyankopɔn nipa no na wakyerɛ yɛn faako a yɛmfa.” 9 (Sɛ kan no na ɔbarima yi rekobisa Onyankopɔn hɔ ade wɔ Israel a, anka nea ɔbɛka ne sɛ: “Ma yenkohu ɔdehwɛfo+ no.” Nea wɔfrɛ no odiyifo nnɛ no, kan no, na wɔfrɛ no ɔdehwɛfo.) 10 Ɛnna Saul ka kyerɛɛ ne somfo no sɛ: “Nea woaka no ye.+ Bra ma yɛnkɔ.” Na wɔkɔɔ kurow a nokware Nyankopɔn nipa no wom no mu. 11 Bere a wɔreforo akɔ kurow no mu no, wohuu mmabaa bi sɛ wɔrekɔsaw nsu.+ Ɛnna wobisaa wɔn sɛ: “Ɛha na ɔdehwɛfo+ no wɔ anaa?” 12 Ɛnna wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɔwɔ ha. Hwɛ! Ɔwɔ mo anim. Monka mo ho efisɛ waba kurom ha nnɛ, na ɔman no wɔ afɔre bi bɔ+ wɔ sorɔnsorɔmmea+ hɔ nnɛ. 13 Sɛ mudu kurow no mu ara pɛ a, mubehu no ansa na wakɔ sorɔnsorɔmmea hɔ akodidi; ɔman no rennidi kosi sɛ ɔbɛkɔ hɔ, efisɛ ɔno na ohyira afɔre so.+ Ohyira so wie ansa na wɔn a wɔafrɛ wɔn aba no adidi. Enti momforo nkɔ, efisɛ ɔno de, bere yi mu ara na mubehu no.” 14 Na wɔforo kɔɔ kurow no mu. Bere a wɔreyɛ adu kurow no mu no, hwɛ, na Samuel refi adi abehyia wɔn aforo akɔ sorɔnsorɔmmea hɔ. 15 Da a ade rebɛkye ama Saul aba no, Yehowa yii Samuel asotiw+ sɛ: 16 “Ɔkyena saa bere yi mɛsoma ɔbarima bi a ofi Benyamin+ asase so aba wo nkyɛn, na sra no ngo+ na fa no si me man Israel so panyin; ɔno na obegye me man afi Filistifo nsam,+ efisɛ mahu me man amanehunu, na wɔn sufrɛ abedu me nkyɛn.”+ 17 Na Samuel huu Saul, na Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbarima a meka kyerɛɛ wo sɛ, ‘Oyi na obedi me man so’ no ni.”+ 18 Na Saul twiw bɛn Samuel wɔ kurow pon no ano, na ɔkae sɛ: “Mesrɛ wo ka kyerɛ me, ɛhe na ɔdehwɛfo no fie wɔ?” 19 Ɛnna Samuel buaa Saul sɛ: “Mene ɔdehwɛfo no. Foro di m’anim kɔ sorɔnsorɔmmea hɔ, na mo ne me bedidi nnɛ+ na anɔpa magya mo kwan, na nea ɛwɔ wo komam nyinaa, mɛka akyerɛ wo.+ 20 Wo mfurum a wɔyerae nnɛ nnansa no,+ mfa wo koma nkɔ+ wɔn so, efisɛ wɔahu wɔn. Na hena na Israel nneɛma pa nyinaa wɔ no?+ Ɛnyɛ wo ne wo papa fie nyinaa dea?” 21 Ɛnna Saul kae sɛ: “Me de, meyɛ Benyaminni; ɛnyɛ Israel mmusuakuw+ mu ketewa+ no mu na mifi? Na Benyamin abusuakuw mu mmusua nyinaa no, ɛnyɛ m’abusua ne ketewa koraa?+ Enti adɛn na woka saa asɛm yi kyerɛ me?”+ 22 Afei Samuel faa Saul ne ne somfo no, na ɔde wɔn baa adidibea hɔ, na ɔde wɔn tenaa beae titiriw+ wɔ wɔn a wɔafrɛ wɔn no mu; ná wɔyɛ mmarima bɛyɛ aduasa. 23 Akyiri yi, Samuel ka kyerɛɛ oduannoafo no sɛ: “Fa nankum a mede maa wo a meka kyerɛɛ wo sɛ, ‘Fa sie’ no bra.” 24 Ɛnna oduannoafo no kɔfaa ne srɛ ne nea etua so no, na ɔde besii Saul anim. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nea wɔde siei no ni. Fa si w’anim. Di, efisɛ wɔde asie ama wo abɛpem bere a wɔahyɛ yi na ama wo ne wɔn a wɔafrɛ wɔn no adidi.” Enti Saul ne Samuel didii saa da no. 25 Wowiei no, wosian fii sorɔnsorɔmmea+ hɔ kɔɔ kurow no mu, na ɔne Saul kasae, ɔdan atifi.+ 26 Afei wɔsɔree anɔpahema, na ade rekye no, Samuel frɛɛ Saul ɔdan atifi hɔ sɛ: “Sɔre, na minnya wo kwan.” Ɛnna Saul sɔree, na wɔn baanu nyinaa, ɔne Samuel, fii adi. 27 Bere a wɔresian afi kurow no mu no, Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Ka kyerɛ ɔsomfo+ no sɛ ɔmmɛsen nni yɛn anim nkɔ”—enti ɔbɛsen kɔe—“na wo de, gyina hɔ na menka asɛm a Onyankopɔn aka no nkyerɛ wo.”